Maxaad ka taqaanaa noocyada duufaanta iyo halka ay ka soo jeedo magac-bixinteedu? – Somali Paper
Maxaad ka taqaanaa noocyada duufaanta iyo halka ay ka soo jeedo magac-bixinteedu?
Waxaa la daabacay September 11, 2017
Sannad kasta waxaa qaybo ka mid ah caalamka ka dhaca duufaano wata dabaylo iyo baraf oo gaysta burbur xoogan.
Duufaantu waxa ay ka abuurantaa xaalad cimilo oo ka dhalata oogada sare ee badda, dabeeto waxay u jihaystaa dhulka iyada oo ka tagta saamayn balaadhan.
Dabaylaha ka yimaada badweynta dhacda dhulka kulaylaha ah ee dunida ayaa kiciya duufaanta. dabaylaha ka kaca badweynta baasifiga ayaa isu roga duufaan iyaga oo ku dhufta dhinaca koonfureed ee dunida.
Duufaanta ka abuuranta (Atlantic Ocean) ee ku dhufata maraykanka waxaa lagu magacaabaa (Typhoon) sida laga soo xigtay website (Hurricane ) ee xarunta cabirka dabaylaha mareykanka.
Duufaantu waxay wadataa dabaylo aad u xoogan, hilaac iyo hanqadh, dhibcaha biyihu waxay ay gaadhaan mararka qaar 1km oo joog sare ah.
Dabaylaha xoogani waxaa ay sababaan cartanka badda iyaga oo kiciya mowjado iyo hirar aad u sareeya oo gaadha ilaa 6Mitir, taasina waxa ay sababtaa burbur waxayna dumisaa aqalada iyo goobaha kale iyada oo xididadana u siibta dhirta.
Hadaba marka uu ilayska qoraxda ku dhacdo oogada sare ee badda ayay biyuhu kululaadaan waxaana ka dhasha duufaan taa oo sii xoogaysata mar kasta oo kaarboonku kor u koco, waxayna hoos u dhacdaa marka ay dhulka u jihaysto.
Halkee ayay ka soo jeedaa magac-bixinta duufaantu?
Khuburada dhinaca cimilada ku takhasusay ayaa u magac-bixiya si loogu aqoonsado, waana magacyo horay loo diyaaariyay oo ku socda Xuruufta Alifbeetada .
Waxaa loo adeegsadaa cabir caalami ah iyada oo la eegayo xawaaraheeda lagu qiyaaso cabirka fujita scale oo loo soo gaabiyo F waana sidan hoos ku xusan:
Qaybta 1aad : Duufaan khafiif ah (xawaare 113-118 KM saacadii).
Qaybta 2aad: Dufaan dhexdhexaad ah ( xawaare 152KM saacadii).
Qaybta 3aad: Duufaan xoog ah (xawaare 180-210 KM saacadii).
Qaybta 4aad: Duufaan aad u xoog badan ah (xawaare 250KM).
Qaybta 5aad: Duufaan wax burburisa waxaa laga yabaa in ay gaadho ila ( 300km saacadii).
Qaar ka mid Duufaanadii ugu halista badnaa ee aduunka soo maray
– National hurricane center http://www.nhc.noaa.gov/
– Sky news https://www.skynewsarabia.com/web/article/785257/
– Al Arabiya news https://www.alarabiya.net/ar/science/2017/09/08
Rukumo qormooyinka lamidka ah
ku dir qormooyinka ugu akhriska badan sanduuqayga dhambaalada
Dooro nooca Qormooyinka Cusub buugta cusub
Ha walwalin ma dirno Spam
Qormooyin la xiriira Adduunka
Soo daadi qormooyin la xiriira Adduunka
Qormooyin akhrin mudan